Iindaba -Iprojekthi yokutsalwa kwepepile yebhayoloji yeChenguang iphumelele iBhaso leShishini lase China
Nge-27 kaDisemba, i-China Federation yezoqoqosho kwimizi-mveliso yabamba iNkomfa yesithandathu ye-China yeeMbasa zoShishino e-Beijing. Amashishini kunye neeprojekthi ezingama-93 ziphumelele amabhaso e-China Industrial, amabhaso okuncoma kunye neebhaso zokutyumba ngokwahlukeneyo. Iqela leChenguang biotechnology "ipepper technology technology kunye nezinto ezintsha kunye neprojekthi yoshishino" iphumelele ibhaso lokuncoma.
Imveliso yeCapsicum yokukhupha ikakhulu i-capsanthin kunye ne-capsaicin, ezisetyenziswa kakhulu ekutyeni, amayeza nakwezinye iinkalo, kwaye zizinto eziyimfuneko kubomi banamhlanje. Ngama-1950, iUnited States yathatha phambili ekukhipheni iCapsanthin kwipepper, ekhokelela kwimizi-mveliso. Emva kwexesha, eli shishini lalilawulwa yiMelika, iSpain neIndiya. I-China yangena kuphela kumzi mveliso wokukhupha ipepile ngeminyaka yoo-1980, ukuqala emva kwexesha, itekhnoloji yokuvelisa umva kunye nemveliso engonelanga. Nangona lilizwe elikhulu elinemithombo yepepper, iimveliso zalo kufuneka zingeniswe phesheya.
I-biology ye-Chenguang yangena kumzi mveliso wokukhupha ipepile ngo-2000. Ioyisile inani leetekhnoloji zokulungisa, ezinje ngokuqhubekeka kwepelepele ngesiphatho, ukudityaniswa okuqhubekayo kokuthintela igradient, amanqanaba ngamanqanaba okwahlulahlula phakathi kwe-centrifugal, kwaye yakha i-pepper enkulu yokuqala eqhubekayo umgca wemveliso e China. Amandla ayo emveliso aphuculwe kakhulu. Ngophuculo oluqhubekayo kunye nokuyila, okwangoku, inkqubo enye yemveliso yeetoni ezili-1100 zezinto ezenziweyo ngemini, amaxesha aphindaphindwe kaninzi kunakwimveliso yamandla apheleleyo yeentsuku ezili-100 anokuhlangabezana nemfuno zehlabathi. ICapsaicin kunye ne-capsaicin bakhutshwa ngaxeshanye. Isivuno se-capsaicin sonyuke ukusuka kwi-35% ukuya kwi-95% ngelixa isivuno se-capsaicin sonyuke nge-4 okanye nge-5 yeepesenti ukuya kuma-98%. Ilahleko yesinyibilikisi ngetoni nganye yezinto ekrwada yancitshiswa ukusuka kwi-300 kg ukuya ngaphantsi kwe-3 kg ngokudityaniswa ngokudibeneyo kwenkqubo yoxinzelelo lweflash. Itekhnoloji yokwenziwa kwamashishini okucoceka okuphezulu kwe-capsaicin yikristale, ukukhutshwa okubalaseleyo kwe-capsicum pigment ebomvu, i-capsicum pigment ebomvu kunye ne-capsaicin microemulsion yenziwe e-China.
Uphando lwebhayoloji lwaseChenguang lufumene imithombo yongcoliseko kunye nemithetho yokufuduka yokulandela umkhondo wezinto ezinobungozi kwipepile kunye neemveliso zayo ezikhutshiweyo, zaveliswa kwaye zaphuhliswa kwetekhnoloji yokususa i-red yaseSudan, iRhodamine B kunye ne-organophosphorus intsalela yezibulala-zinambuzane kwiimveliso, yasungula umgangatho kunye nenkqubo yokuqinisekisa ukhuseleko yonke inkqubo yepepile ukusuka ekutyalweni, ekuvuneni, ekugcineni nasekuhambiseni ukuya ekuqhubeni, kwaye yaqulunqa imigangatho yesizwe yezinto ezifanelekileyo, iimveliso kunye neendlela zokufumanisa. Umgangatho wemveliso uyanelisa Dibana neemfuno zentengiso ephezulu yamazwe aphesheya, kwindawo ekhokelayo kwilizwe liphela.
Ngexesha lokumiliselwa kwetekhnoloji yokutsala ipepile kunye neprojekthi yezixhobo kunye neprojekthi yoshishino, kwafunyanwa amalungelo awodwa omenzi wechiza angama-38 kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza amatsha ama-5. Ngobuchwephesha obuphambili, izixhobo kunye nokwenziwa kwamashishini, isabelo sentengiso se-capsicum ebomvu, eveliswa ngokuzimeleyo e-China, inyukile ukusuka ngaphantsi kwe-2% ukuya ngaphezulu kwe-80% kwimarike yehlabathi (i-Chenguang biology i-akhawunti ye-60%), kunye ne-capsaicin inyukile ukusuka kwi-0.2% ukuya kwi-50% (i-Chenguang biology i-40%), ephumelele i-China ilungelo lokuthetha kurhwebo lwamazwe aphesheya lwe-pepper.
Ibhaso lase China lase China lelona bhaso liphezulu kwicandelo lezemveliso lase China elivunyiweyo liBhunga likaRhulumente. Kukhethwa rhoqo kwiminyaka emibini ukuseta inani lamashishini kunye neeprojekthi ezibalaseleyo kunye nokuqhuba ukusekwa kwenani elikhulu lamashishini ngokukhuphisana okungundoqo.